Mareykanka: Soomaaliya waxey heysataa fursadii ugu fiicneyd muddo rubuc qarni ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka: Soomaaliya waxey heysataa fursadii ugu fiicneyd muddo rubuc qarni ah
Muqdisho – Mareeg.com: Ku Simaha Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qabailsan Arrimaha Soomaaliya, Brian H. Phipps, ayaa ugu hambalyeeyay Soomaaliya oo u dabaal-dageyso maalinta qaranimada ee 1-da July.
“Aniga oo ka wakiil ka ah Madaxweyne Barack Obama, Xoghayaha Arrimaha Dibedda John Kerry iyo shacabka Maraykanka, waxaan hambalyo ku aadan xuska sanad guurada 54-aad ee maalinta xoriyada Soomaaliya u dirayaa dowlada iyo shacabka Soomaaliya”, ayuu yiri Phipps.
Brian H. Phipps ayaa sheegay in sida ay sheegtay dhawaan, Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibaedda ee dhinaca siyaasadda, Wendy Sherman, “Hadda waa wakhtiga ugu wanaagsan, fursada ugu fiican ee muddo rubac qarni ah oo ay Soomaalida garan karaan ballaanqaadkii wehliyey xornimadda wadankooda”.
“Sidaas darteed dowladda Mareykanka waxa ay taagan tahay goobta saxda ah, garabka dadka Soomaaliyeed. Annagoo taageereyno horumarka dalka uu ku tallaabsanayo, istaraatiijiyaddeena waxaa xuddun u ah saddex arrimood oo kale ah Amniga, dowlad wanaagga, iyo horumarinta” ayuu sidoo kale Brian H. Phipps.
“Dowladda Mareykanka waxa ay xaqiijineysaa sida ay uga go’an tahay in ay taageerto shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka shaqeynaya xasillinta iyo maamulidda dalka” ayuu sidoo kale yiri Brian H. Phipps.
Ugu dambeyntii, Brian H. Phipps ayaa sheegay inuu rajeyneynayo in Mareykanku si xiriir dhow ugu shaqeyn doono faa’iidada Soomaaliya iyo gobolkaba.
Annadif: Soomaalidu waa iney shaqeeyaan ka bixitaanka xaaladda dalku ku jiro